घोकन्ते शिक्षाले देश विकास हुँदैन : डा. बाबुराम भट्टराई - Nayabulanda.com
घोकन्ते शिक्षाले देश विकास हुँदैन : डा. बाबुराम भट्टराई
नयाँ बुलन्द २५ जेष्ठ २०७६, शनिबार २३:०५ 239 पटक हेरिएको
काभ्रेपलाञ्चोक : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले घोकन्ते शिक्षाबाट समाज र देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सो अवसरमा विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई समेत सम्मान गरिएको छ ।